U Beddel Faylkii hore ee PST Faylka Cusub ee Qaabka 'Unicode Format' - Tilmaamo Tallaabo-tallaabo ah
Bogga ugu weyn Products DataNumen Outlook Repair U Beddel Muuqaalka Muuqaalka 97-2002 PST Faylka Foomka Muuqaalka 2003-2010 Unicode
Isticmaalka DataNumen Outlook Repair si loogu badalo Muuqaalka Muuqaalka 97-2002 PST Faylka loo beddelo Qaabka cusub ee Muuqaalka 2003-2010 Unicode
Xusuusin: Waa inaad haysataa Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya oo lagu rakibay si aad u isticmaasho hagahan.
Laga soo bilaabo Muuqaalka 2003, qaab fayl cusub oo PST ah ayaa la soo saaray oo leh faa'iidooyin badan oo ka badan kii hore. Isticmaalayaasha ugu dambeeya, most kuwa muhiimka ah waa:
Taageero Unicode luqado badan
Xaddidaadda 2GB ee cabbirka faylka PST
Maya xaddidaadda 65,000 (ama 16,000 noocyadii hore) ee tirada walxaha halkii fayl
Midka hore dartiis, qaabka cusub ayaa sidoo kale loo yaqaan Qaabka Unicode caadi ahaan, halka qaabkii hore ee markaa loo yaqaan Qaabka ANSI si waafaqsan. Labada magacba waa la isticmaali doonaa inta lagu jiro tusahan. Sida maalmahan xogta isgaarsiintu si xawli ah u kordhayso, ka saarida xaddidaadaha faylka PST aad ayey muhiim ugu tahay dadka isticmaala. Sidaa darteed, waxaan si weyn kuugu soo jeedinaynaa inaad u beddesho feylashaadii hore ee ANSI PST foomka cusub ee 'Unicode'. Waxaa intaa dheer, tani sidoo kale waa xalka ugu fiican dhibaatada file 2GB PST ka weyn.
Microsoft ma aysan soo saarin qalab sameyn kara badalista. Laakiin ha ka welwelin. DataNumen Outlook Repair taas ayaa kuu samayn karta.
Fiiro gaar ah: Kahor intaadan badalin fayl duug ah ANSI PST oo leh DataNumen Outlook Repair, fadlan xir Microsoft Outlook iyo wixii kale ee codsiyo ah ee wax ka beddeli kara faylka PST.
Xulo faylkii hore ee ANSI PST feyl ahaan asalka faylka PST ee lagu hagaajinayo:
Maadaama faylka PST uu kujiro qaabkii hore ee Muuqaalka 97-2002, fadlan sheeg qaabka feylkiisa "Outlook 97-2002" sanduuqa iskujira agteeda sanduuqa wax ka beddelka faylka. Haddii aad uga tagto qaabka "Awood Gaar Ah", markaa DataNumen Outlook Repair iskaan doonaa isha PST faylka si loo ogaado qaabkeeda si otomaatig ah. Si kastaba ha noqotee, tani waxay qaadan doontaa waqti dheeri ah oo aan loo baahnayn.
Maaddaama aan dooneyno inaan u beddelno faylka ANSI PST qaabka Unicode, waa inaan ku xulanno qaabka feylka PST loo beddelay "Outlook 2003-2010" ee sanduuqa iskujira. agteeda sanduuqa wax ka bedelka faylka la beddelay. Haddii aad u dejiso qaabka "Outlook 97-2002" ama "Auto Determined", markaa DataNumen Outlook Repair waxaa laga yaabaa inuu ku guuldareysto inuu ka baaraandego oo uu beddelo faylkaaga ANSI PST.
Fadlan ogow waa inaad haysataa Muuqaalka 2003 ama noocyo ka sareeya oo rakibay si faylka loogu beddelo si guul leh.
Click ah batoonka, iyo DataNumen Outlook Repair doonaa start iskaanka iyo badalida isha ANSI PST faylka. Bar horumarka
Hawsha ka dib, haddii ilaha ANSI PST faylka loo rogi karo faylka cusub ee Unicode PST si guul leh, waxaad arki doontaa sanduuqa farriinta sidan:
Hadda faylka cusub ee PST ee la beddelay wuxuu ku jiraa qaabka Unicode, kaas oo lagu furi karo Microsoft Outlook 2003 ama noocyo ka sarreeya.
U Beddel Muuqaalka Muuqaalka 97-2002 PST Faylka Foomka Muuqaalka 2003-2010 Unicode